Iipropati ezisebenzayo ze-okra
I-Bamia [ bindi, okra ] yipoda ene-conic ebonakalayo, ifoto eluhlaza. Ufumene ukuhambisa kwawo kumazwe afudumeleyo. Ilizwe lakubo yintsimi eseNayile (iNtshona Afrika), kunye ne-Ethiopia eMbindi Mpuma. Ingakhula kwiimeko ezipholileyo, kodwa kuphela ngokusebenzisa iindlela ezizodwa zokulima kwesi sixeko. I-okra ehloniphekileyo ithathwa njenge-hibiscus, i-cocoa kunye nekotoni. Isakhiwo sekhempi esityebile sinquma izakhiwo ezincedo ze-okra.
Ngexesha leMfazwe Yehlabathi yesiBili, ikhofi yayinqongophala. Kwaye oku kubangela ukuba abantu baseAfrika naseAsia basebenzise endaweni yekhofi imbewu ye-okra. Le ngxaki yafumana igama layo. Wayebizwa ngokuba yi-okra "fever". Ukususela kula maxesha, i-okra yayifumaneka lula kubahwebi nanini na.
Ngoku le mifuno iyathandwa kakhulu ngamagourmets kumazwe amaninzi nakwiizwekazi, ithandwa ngabaninzi, abemi baseTexas kunye nabantu baseTimbuktu.
Bamia: izakhiwo ezincedo
Iifowuni ezitsha zale mifuno ziqulethe izinto ezininzi ezinomsoco. Ziqukethe ezininzi iivithamini (B6, C, K, A), zikhona izixhobo ze-calcium, i-thiamine, isinyithi, i-folate kunye ne-potassium. I-Bamia ithandwa kakhulu kumxholo ophezulu wefayibha yokutya kunye neeprotheni. Ngokuqhelekileyo, kungekhona i-okra, kodwa iphupha lezityalo zemifuno!
Ukusetyenziswa kwe-okra kubaluleke kakhulu kubafazi abakhulelweyo ngenxa yokuba ininzi ye-acid echaphazelekayo echaphazelekayo ekwenzeni inkqubo ye-nervous central in the first months of embryo formulation.
Ukwakhiwa kwe-okra kuqulethe i-citrus kunye ne-fibers yemvelo ekwazi ukulawula izinga leshukela legazi egazini, elithintela emathunjini amancinci. Njengomgaqo, kucetyiswa ukusebenzisa i-okra kulabo bahluphekayo ngenxa yokuphazamiseka kwamathumbu emathumbu kunye nesisu ngokubanzi. Iipods ze-okra zandinceda ukunyuselwa kwesekondari, zibanceda ukuhlamba i-cholesterol, i-toxins, i-bile. Ukusetyenziswa kwe-okra kunceda ukunqanda ukuqhaqha kunye nokuqhaqha. I-okra isenokunyanga izilonda zesisu. Iipods ze-okra zancedisa ukuphuhlisa i-microflora encedo emathunjini. Ikhuthaza ukunyuka kweebhaktheriya ezinokubaluleka ezifana neprobiotics. Kwakhona kusebenze ukuhlanganiswa kwe-vitamin B.
Iipods ze-okra zilungele abo bafuna ukunciphisa umzimba. Kwaye akukho nto eyonakalisa impilo. Kwi-100 gram yeepods kule mifuno, i-40 kcal kuphela. Kubalulekile kulabo abanezimo ezixinezelekileyo, isifo esingapheliyo sokugula, kunceda ukulwa ne-angina, i-pneumonia. I-Bamia inceda ukugcina amajoni eselula, inako ukunciphisa ukuhlaselwa kwe-asthmatic, kuba iqulethe i-concentration ephezulu ye-antioxidant elements. Kukho iipropati ze-okra iipods ezinokuyomeleza izindonga ze-capillary, kuyisisombululo esihle kakhulu seesidlo kulabo abaneengxaki ze-atherosclerosis.
Uphando lwezenzululwazi kwiminyaka yamuva luqinisekisile iipropati ze-okra ukukhusela ezinye iintlobo zomhlaza, umzekelo, umhlaza womhlaza, ukunciphisa umngcipheko wesifo sikashukela kunye ne-cataract.
Ndiyabulela uluhlu oluninzi lwezakhono eziluncedo ze-okra, izazinzulu kunye noogqirha baqalisa ukuphanda ngokucacileyo le mifuno. Okwangoku, ezininzi iimvavanyo zenziwe ngokuphumelelayo, umzekelo, ekutshintsheni uxhumano lwegazi lwe-plasma kunye nezinto ezisebenzayo zamacube ezinamaqanda e-okra.
I-okra kunye nobuhle
Ngokwababhali-mlando, ubuhle obuhle kakhulu kwixesha la mandulo, njengeCopopra yaseYiputa okanye iShayina Yang Guifei, babethanda kakhulu i-okra. Ngendlela, ii-pods zalo mhlaza zingasetyenziswa njengeziqholo.
Ukunikezela, umzekelo, ukhanyisela iinwele kunye nokuqiniswa kweengcambu zabo, kubalulekile ukunqumla iipods ngendlela yemifudo, ubilise kude kube yinto ehambelana ngayo. Emva koko umkhiqizo obangelwayo kufuneka ucolile, unxweme umlenze omncinci kwaye usebenzise njenge-balm yeenwele.
Ukukhutshwa kwe-okra pods, phakathi kwezinye izinto, kunokudibaniswa kwiikrama ozisebenzisayo imihla ngemihla. Kuya kunceda ukukhusela ukungafani kwesikhumba kunye nezibhokhwe.
Bamiya: ukhetho nokulungiselela
Amaninzi amaninzi afuna ukulahlekelwa ngamapounds angaphezulu, ngakumbi ngehlobo. Ukwenza oku, kufuneka nje ukufaka i-okra pods ekudleni kwakho. Xa ukhetha, kufuneka uqaphele iipod kunye nokubonakala kwazo. Kude kufuneka babe ngama-8-10 centimeters, umbala kufanele ube luhlaza oluhlaza. Kwiipods akufuneki kubekho amabala okubunjwa kunye nokunyanzelwa komile. Gcina le mifuno kwiipakethi kwindawo ebandayo malunga neentsuku ezintathu. Ngaphambi kokuba usebenzise i-okra, zonke iipod kufuneka zihlanjwe phantsi komlambo wamanzi asebenzayo. Iziqu kunye neengcebiso zayo kufuneka zisuswe.
Iigrafu ezinkulu ze-okra zinokuba neendawo ezincinci kwesikhumba esingatshisa. Xa uphathwe ngukushisa, bayanciphisa, kodwa kwifomu eluhlaza kubangela ukuba kubangele. Xa usika i-okra, kufuneka usebenzise iiglavu.
Ungasebenzisi izitya zensimbi kunye neethusi xa wenza i-okra. Kungase kube ne-chemical response which can worsen the type of food cooked. I-okra iya kufumana umbala omnyama ongathandekiyo.
I-Bamia iqulethe i-mucus eninzi, ngoko xa ulungiselela kufuneka ungeze iviniga okanye ezinye iindidi ze-asidi, kwaye iitamatisi ziya kulandela. Iipods ze-okra zitshiweyo kwaye zityuwe, zidibene. Iipods ze-okra zingongezwa kwiidayisi zeerisi, i-curry, isobho. I-Bamia ingasetyenziselwa enye i-zucchini kwimeko yokulungiselela isitya se-ratatouille, esilungisiwe kwaye sithandwa yizo zonke iigourmets. Ngokubhekiselele kwixesha le-seasonings, i-okra ihlanganiswe ngokufanelekileyo nejisi lemon, ioli yeoli, i-curry powder, thyme, pepper kunye ne-marjoram.
Ukuba ufumana i-okra kwivenkile okanye kwimarike, qiniseka ukuba uyithenge kwaye uyidle, kwimpilo!
Indlela yokuphucula imetabolism emzimbeni?
Isiqhelo somxholo we-cholesterol egazini lomntu
I-Kurban-Bayram 2016 eMoscow, eTatarstan, eTajikistan - xa kuqala kunye nokuphela. Ndiyakuvuyela iKirban-Bayram ngesiTurkey, isiTatar, isiRashiya kunye nemifanekiso
Ukuhlanjululwa ekuzalweni komntwana: iindlela ezili-8 ezivela kumlumbi ozuzayo
Kutheni ungeke ukwazi ukunyamezela abantu?
Amakhiwane atyiweyo kunye ne-ricotta
Kwaziwa ukuba uSergei Lazarev uchitha ixesha lokundwendwela e-Italy, isithombe